Tsaratanana : Kidnapping valo -
AccueilRaharaham-pirenenaTsaratanana : Kidnapping valo
01/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niova endrika ny asan-dahalo any amin’iny faritr’i Tsaratanàna iny araka ny fanazavana nentin’ny solombavambahoaka voafidy tao Tsaratanàna, Jaona Ratefiarijaona (hita amin’ny sary). Tsy vaky trano na halatr’omby fotsiny intsony no ataon’ireo dahalo any an-toerana fa miditra amin’ny fakàna an-keriny ihany koa. Ny fanamboarana ny lalam-pirenena RN 33-A no voalazan’ity depiote ity fa antony nahatonga izany…
Fakàna an-keriny miisa valo no nambaran’ny solombavambahoaka Jaona Ratefiarijaona fa nitranga tao amin’ny faritra manodidina an’i Tsaratanàna, ka isan’izany goavana tamin’izany ny kidnapping nahazo ny fianakaviana Rabezaha izay nitakian’ireo dahalo vola mitentina 50 Tapitrisa. Teo ihany koa ireo mpiasan’ny KRAOMA miisa efatra, ary misy olona fito izany indray koa nalain’izy ireo an-keriny ka vola 350 Tapitrisa tsy miady varotra no takian’ireo dahalo ho tambin’ny famotsorana ireto farany.
Izany andian-dahalo tarihin’i Del izany no fantatra fa mpanao ity fakàna an-keriny ao ity noho ny fanamboarana ny lalàm-pirenena RN 33-A, izay mampitohy an’i Tsaratanàna-Brieville ary mivoaka any Ambondromamy. Tsy eken’ireto andian-dahalo ireto ny fanamboaran’ny fanjakana ity RN 33-A ity satria manelingelina azy ireo. Efa ho 50 taona mantsy no tsy nisy nikitika io ampahan-dalana io, araka ny fanazavana nentin’ny solombavambahoaka Jaona Ratefiarijaona koa ny fanamboarana azy amin’izao fotoana izao dia noraisin’ireo andian-dahalo ho fanelingelenana ny asa ratsy nahazatra azy ireo hatramin’izay.
Nambaran’ity olom-boafidy ity ihany fa nahazo faka sy fototra ary lasa tambazotra matanjaka ity andian-dahalo tarihan’i Del ity, ka tafiditra amin’izany hatramin’ny olom-panjakana ifotony mihitsy. Nisongadina nandritra ny fanambarana nataon’ity solombavambahoaka ity hatrany fa isan’ireo lasibatry ny ekipan’i Del ny tenany miampy izany kapiteny izany. Mihorohoro fatratra tokoa ny mponina manodidina an’i Bemavo, Maevatanàna, Alaotra Mangoro, Betsiboka ary Tsaratanàna noho ity tambazotra matanjaka ity.
Antony iray azo hanazavana izao fiovam-penitra mahery vaika eo amin’ny asan-dahalo any Tsaratanàna izao koa ity entina eto ity izao: “Manahirana azy ireo ny mitady mpividy omby halatra, eo ihany koa ny fahasahiranana amin’ny fandroahana ireny omby ireny, koa dia aleon’izy ireo vola avy hatrany amin’ny alalan’ny kidnapping”.
Rehefa mifaramparana tahaka izao ny taona dia efa miandrandra ny fiakaran’ny karama indray ny mpiasa amin’ny taona vaovao. Matetika dia io no hitsaran’ny olom-pirenena ivelany ny fitondrana misy eo hoe ohatrinona indray izao no ho ...Tohiny